Nokia 3.1 Plus: Njirimara, Nkọwapụta na Ahịa | Gam akporosis
Nokia 3.1 Plus bịarutere: zute ihe ọhụrụ sitere na ụlọ ọrụ Finnish
Aaron Rivas | | Mobiles
Nokia 3.1 Plus bụ ọkwa ugbu a. Ekwentị a na - abịa dịka ama ama nwere uru dị mma maka ego dịka ụdị ndị ọzọ n’usoro ya.
Ngwaọrụ na-abịa na nnukwu ihuenyo na imepụta ihe bara uru.adịchaghị, ọ bụ ezie na enweghị ọnya obi notch. N'ime ya na-ezochi ikike ka ukwuu maka ndị ọrụ nwere ọchịchọ dị elu na nkọwa ndị ọzọ anyị ga-ekpughere gị n'okpuru.
Nokia 3.1 Plus na-akwadebe ihe ngosi 6.0 nke anụ ọhịa diagonal HD +. Nke a nwere mkpebi nke pikselụ 1.440 x 720, nke a na-achịkọta n'ụzọ doro anya na ngosi ngosi ngosi 18: 9 ugboro ugboro. Ọzọkwa, dị ka anyị kwurula, ọ nweghị ọkwa, ya mere ọ na-agbaso usoro nke ugbu a.
Banyere nkọwa ndị ọzọ, ngwaọrụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ Finnish kwadoro ya a Mediatek Helio P22 isi ihe nhazi asatọ, SoC nke nwere ike iru ugboro kachasị nke 2.0 GHz ekele maka isi ya Cortex-A53 asatọ. N'otu oge ahụ, ọnụ nwere RAM nke 2 ma ọ bụ 3 GB, ohere nchekwa nke 16 ma ọ bụ 32 GB na batrị ikike 3.500 mAh, nke ga-enye anyị nnwere onwe dị mma.
0.1 Na ndị ọzọ ozi ọma: Nokia 7.1 bụ ukara: ngosi na notch, SD636 na ndị ọzọ
Na ndị ọzọ ozi ọma: Nokia 7.1 bụ ọkwa gọọmentị: gosipụta na ọkwa, SD636 na ndị ọzọ
N'aka nke ọzọ, obụrede mbụre a n'azụ igwefoto nke 13 na 5 MP mkpebi na aperture f / 2.0 na f / 2.4, karị. Na ngụkọta, ihe ntanetị 8 MP nwere oghere f / 2.2 na-anọdụ ala n'ihu maka selfies na oku vidiyo. Ọ nwekwara onye na-agụ akara mkpịsị aka azụ, jaịlị isi, microUSB n'ọdụ ụgbọ mmiri, LTE Cat. 4 njikọ, L + L, VoLTE, VoWiFi, Bluetooth 4.1 na WiFi 802.11 b / g / n.
Ekwupụtala Nokia 3.1 Plus na India n’ego efu ya 11.499 rupees (135 euro approx.) Maka ụdị ya na 2 GB nke Ram na 16 GB nke ebe nchekwa dị n'ime. Banyere ụdị nke ọzọ, ọ nweghị ozi ọ bụla gbasara ọnụ ahịa ya. Ọ ga-abata na-acha anụnụ anụnụ, ọchịchịrị isi awọ na ọcha.
Banyere nnweta na mba ahụ, enweghi kwa ihe omuma banyere mgbe oga adi, ma ọ bụ nke ma ọ bụrụ na ọ ga-agafe ókè ya na Europe na ụwa. Nke a bụ ihe a na-achọ ịkpọsa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Nokia 3.1 Plus bịarutere: zute ihe ọhụrụ sitere na ụlọ ọrụ Finnish